Burma Partnership » Nationwide Ceasefire Coordination Team
Posts Tagged ‘Nationwide Ceasefire Coordination Team’ (30 found)
၁။ မြန်မာပြည်၏ နှစ်ပေါင်း(၇၀)နီးပါး ဖြစ်ပွားနေသောပြည်တွင်းစစ်သည် နိုင်ငံရေးအခြေခံ (သို့တည်းမဟုတ်) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဿနာအကြောင်းရင်းခံကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေခံပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံမှ ခေတ်အဆက်ဆက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ခေတ်အဆက်ဆက်အုပ်စိုးသူများအနေဖြင့် သဘောထား စေတနာမမှန်ကန်၍ ယနေ့ထိတိုင် ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး သောပြည်တွင်းစစ်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေရသည် […]
October 3, 2015 • By United Nationalities Federal Council • Tags: 2015 Elections, ASEAN, Ethnic Nationalities, Nationwide Ceasefire Agreement, Nationwide Ceasefire Coordination Team, United Nationalities Federal Council • Read more ➤
Ethnic Armed Organizations’ Summit Statement
The Summit of the Ethnic Armed Organizations’ (EAOs) top leaders was held successfully in Chiang Mai, Thailand on August 21-24 and was attended by fifteen of the seventeen EAOs’ representatives […]
August 24, 2015 • By Ethnic Armed Organizations • Tags: Ethnic Armed Organizations, KIO, Nationwide Ceasefire Agreement, Nationwide Ceasefire Coordination Team, New Mon State Party • Read more ➤
ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောခ င်တာကတော့ အခုလက်ရိပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအတော်များများမှာကျြုံတွေ့နေ ရတဲ့ ရေဘေးဒုက္ခတွေအတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့အင်မတန်မ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း တွေမှာလည်း အစိုးရအနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ပံ့ပိုး နိုင်သည်မှာကိုလည်း တတ်အားသရွေ့ပါဝင်ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိပါတယ် […]
August 6, 2015 • By Ethnic Armed Organizations • Tags: ASEAN, Ethnic Armed Organizations, Nationwide Ceasefire Agreement, Nationwide Ceasefire Coordination Team, Peace Process, Senior Delegations, Union Peace Working Committee • Read more ➤
PEACE Update: Myanmar Peace Process ( 1 June –3July 2015)
2-9 June 2015: Ethnic Leaders’ Summit (Law Khee Lar, Karen State). Leaders of Ethnic Armed Organizations (EAOs) have declined to sign the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) in its present form and outlined the following changes to the March 2015 draft NCA. See the attached report, “Summit of the Top Leaders of Ethnic Armed Organizations, Resolutions and Minutes” for details […]
July 3, 2015 • By PEACE UPDATE • Tags: ASEAN, Ethnic Nationalities, Kachin State, Karen State, Nationwide Ceasefire Agreement, Nationwide Ceasefire Coordination Team, Peace Update, Shan State • Read more ➤